के सभापति देउवा कमजोर बनेकै हुन ? – Everest Dainik – News from Nepal
के सभापति देउवा कमजोर बनेकै हुन ?
नेपाली कांग्रेसको आइतवार सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानको संशोधनले पार्टी नेतृत्वलाई बन्धक बनाउने बाटोमा लग्न सक्ने कतिपय विश्लेषकले बताएका छन्।
नौ दिनसम्म चलेको बैठक पदाधिकारीको सङ्ख्या र त्यसमा सभापतिलाई दिइने मनोनयन अधिकारको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम अवस्थामा आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भएका हुन्।
तर कांग्रेस प्रवक्ताले भने नयाँ व्यवस्थालाई सभापति मात्र नभएर संगठन समेत बनाउने आधारको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
‘महाधिवेशन जस्तो महासमिति’
महासमिति बैठकले खासगरी पार्टीका नीतिबारे समीक्षा गर्ने बताइए पनि कतिपय जानकारले यसलाई महाधिवेशन जसरी नेतृत्वकै विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्।
बैठकमा धेरैको चासो रहेको एउटा मुख्य विषय विधान संशोधन थियो। जसका लागि महाधिवेशनपूर्व सातै प्रदेश र राजधानीमा छलफल चलाइए पनि बैठक मंसिर २९ गते बैठक शुरू भइसक्दा समेत महासमिति सदस्यहरूको हातमा मस्यौदा पुग्न सकेन।
तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सबैजसो पदाधिकारी निर्वाचनबाटै आउनुलाई पार्टी बलियो बन्ने आधार भएको बताए।
“बलियो संगठनको जगमा टेकेर बलियो सभापति भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। आजका दिनमा पार्टी सभापति सबैलाई जोड्नपर्ने दायित्वमा अहिलेको विधानले व्यवस्था गरेको छ। मलाई लाग्दैन यसले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ।”
महिला सहभागिताका विषयमा समेत पार्टीले सबैभन्दा पहिले ३३ प्रतिशत सहभागितासम्बन्धी संविधानको सुनिश्चितता विधानमार्फत् कार्यान्वयन गरेको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ।
कमजोर बनेका हुन् सभापति?
कतिपय विश्लेषकहरूका भनाईमा त्यसै त कमजोर देखिएको पार्टी नेतृत्वलाई संसोधित विधानमार्फत् झन् कमजोर पार्न खोजेको देखिएको छ।
उनीहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र संसदीय दलको भूमिकामा कमजोर देखिएका छन् र सोही कारण महासमिति सदस्यहरूबाट दबाब थेग्न नसकेर एकपछि अर्को सम्झौता गर्न उनी बाध्य छन्।
अहिलेको केन्द्रीय समितिमा देउवा त्यति कमजोर नदेखिए तापनि यसको असर भविष्यमा आउने सभापतिहरूलाई सबैभन्दा बढि पर्ने देखिन्छ।
काङ्ग्रेस कमजोर बन्नुका पाँच कारण
विधानको संशोधित व्यवस्था अनुरूप यसअघि नेतृत्व हावी देखिने कांग्रेस अब प्राविधिक विधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताइन्छ।
त्यसमाथि प्रादेशिक संरचना उन्मुख हुनुपर्ने संशोधित विधान अझै कतिपयका शब्दमा केन्द्रीकृत स्वरूपकै देखिंदँ संगठनले नयाँपन पाउन कठिन हुनसक्छ।
यस्तै ठान्नेमध्येका एक राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन, “मलाई लाग्दैन भोलिका दिनमा सभापतिले आफूलाई लागेका कुरा पारित गर्न सक्नुहुन्छ। कमजोर सभापति भएपछि उसको मानसिकता समेत कमजोर हुनेछ। यसअघि नेतृत्व हावी देखिने कांग्रेस अब लम्बे र प्राविधिक विधिविधानबाट निर्देशित हुनुपर्नेछ।”
बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा सरकारलाई भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको, संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीको छायाको रूपमा काम गर्न दबाब दिएको भन्दै उसको आकाङ्क्षा पूरा हुन नदिने बताएको छ।
धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दूधर्म पक्षधर विचारलाई महासमिति बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत नगरिए पनि कतिपयले त्यस महासमिति बैठकमा विषयमा चर्चा गर्ने थलो लाई बनाएका थिए।